Hot Pot နဲ့မာလာရှမ်းကောကို တစ်နေရာတည်းမှာစားနိုင်ဖို့………. – FoodiesNavi
Restaurant Guides (292)
Hot Pot နဲ့မာလာရှမ်းကောကို တစ်နေရာတည်းမှာစားနိုင်ဖို့……….
By yin sandi On January 9, 2018 0
ထုံထုံစပ်စပ်အရသာမာလာရှမ်းကောနဲ့ ပူပူနွေးနွေး Hot Pot လေးကို တစ်ပြိုင်တည်းစားသုံးချင်တဲ့ အစားအသောက် Crazy လေးတွေအတွက် Fooddies Navi ကနေ Shwe Pan Htike Hot Pot ဆိုင်လေးအကြောင်းကို သတင်းကောင်းပါးချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာ တည်ရှိတာကြောင့်သွားလာရလွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါတယ်။ Shwe Pan Htike Hot Pot ဆိုင်လေးမှာ Set Menu တွေကို မိသားစု ၊ အပေါင်းအသင်းတွေ ၊ ချစ်သူတွေနဲ့တွဲဖက်စားနိုင်သလို တစ်ပွဲချင်း Menu တွေကိုလည်း မှာယူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။
Shwe Pan Htike Hot Pot ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာကတော့–
-No.27 , 14 Street (Lower Block) , Lanmadaw Township , Yangon. ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သစ်ဥသစ်ဖုတွေကိုဟင်းရည်ထဲပျော်ဝင်တဲ့အထိ (၅)နာရီကြာအောင်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းရည်ပူပူလေးထဲက အရသာစိမ့်ဝင်မှုကြောင့် နူးအိတဲ့အသားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို အားပါးတရသုံးဆောင်နိုင်ပြီး ရရှိနိုင်တဲ့ Menu တွေကတော့ Pork , Chicken , Bacon , Mutton , Prawn , Mushroom pork ball , Assorted-fish fillet , Chicken sausage , Mixed meat balls set , Enoki mushroom , King oyster mushroom , Cabbage , Chinese Cabbage , Chinese mustard , Water spinach , Baby corn , Dried Tofu , Broccoli , Potato , Lotus , Yum Yum Noodles စတာတွေကို တစ်ပွဲချင်းစီစိတ်တိုင်းကျမှာယူသုံးဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သားငါးဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သန့်သန့်ရှင်းရှင်းစားသုံးနိုင်ဖို့အတွက် မနက်(၁၁)နာရိကနေ ည (၁၁)နာရီအထိပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။ ဟော့ပေါ့ကိုတောင့်တနေပမယ့် အပြင်မထွက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Shwe Pan Htike Hot Pot ကနေ Professional Food Delivery Service ‘Deliverlink’ နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာကြောင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှာယူပြီး အိမ်မှာတင်စားသုံးနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်တွေလည်းရှိတာကြောင့် လုံးဝအဆင်ပြေတယ်နော်။
Image Source: www.facebook.com/shwepanhtikehotpot
In Restaurant Guides Tagged Hot pot, malar shan kaw Leaveacomment
ငွေ(၈၀၀)ကျပ်ရှိရုံနဲ့ ထိုင်ဝမ်ခေါက်ဆွဲကောင်းကောင်းလေး စားနိုင်ပါပြီ
ချဉ်ငံစပ်အရသာတွေ လွှမ်းထုံနေတဲ့ ကင်းမွန်အစာသွတ်နည်း
(၁)ချောင်း(၁၀၀)ကျပ်တန် တုတ်ထိုးအမယ်အစုံစုံကို အရသာအဖုံဖုံခံစားရင်း မြည်းစမ်းကြည့်ရအောင်
လျှာနဲ့ကွက်တိ Heart ထိတဲ့ Shwe Lar Hot Pot……
Local Restaurant Guide for the Foodies!
ခံတွင်းလိုက်ပြီး ထမင်းမြိန်သွားစေမယ့် ချဉ်ပေါင်တို့ဟူးထမင်းသုပ် လုပ်စားကြည့်ရအောင် January 22, 2019
အနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့အရသာထူးခြားတဲ့ ဝက်သားကြက်သွန်ဖြူကြော်လုပ်နည်း January 18, 2019
ဒင်းဆမ်းပူပူနွေးနွေးလေးကို အိမ်မှာတင် မှာစားလို့ရပြီနော်။ January 17, 2019
လှအဉ္ဇလီတင့်ရောင်းတဲ့ (၆၀၀၀)ကျပ်တန် ရွှေစိတ်ပျော်သုပ်ကို အိမ်မှာလုပ်စားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း January 15, 2019
ငွေ(၈၀၀)ကျပ်ရှိရုံနဲ့ ထိုင်ဝမ်ခေါက်ဆွဲကောင်းကောင်းလေး စားနိုင်ပါပြီ January 11, 2019
Recipe (78) Restaurant Guides (292) Reviews (33)
© 2018 Digital Laboratory Myanmar. All Rights Reserved.